Ukuziphendukela kwemvelo kobuKristu? - Amaphakethe we-Beroean - Ukubuyekezwa kwe-Webhu.org
by I-AndereStimme | -Nov 24, 2015 | Evolution | 54 amazwana
Izwi likaNkulunkulu liyiqiniso. Sengikuzwile lokho. Konke lokho ngikufundiswe ngokuziphendukela kwemvelo nokuzala kanye nomcabango omkhulu, konke lokhu kuqonde ngqo emgodini wesihogo. Futhi kungamanga ukuzama ukugcina mina nabo bonke abantu abafundiswa lokho ngokuqonda ukuthi badinga umsindisi. - Paul C. Broun, Ingqungquthela yaseRiphabhuliki yaseGeorgia kusuka ku-2007 kuya ku-2015, IKomidi Lesayensi Yezindlu, enkulumweni eyanikezwa eLiberty Baptist Church Sportsman's Banquet ngoSepthemba 27, 2012
Awukwazi ukuba nobabili sane futhi ofundile kahle futhi ungakholelwa ekuziphendukeleni kwemvelo. Ubufakazi buqine kangangokuba noma yimuphi umuntu onobuhlakani, ofundile kufanele akholelwe ekuziphendukeleni kwemvelo. - Richard Dawkins
Abaningi bethu mhlawumbe bangabaza ukuvumela noma ikuphi ukubukwa okuvezwe ngenhla. Kepha ingabe kukhona okuphakathi lapho iwundlu lokudalwa kwebhayibheli nebhubesi lokuziphendukela kwemvelo lingashelela khona kahle?
Isihloko sendabuko nentuthuko yempilo kukho konke ukwahlukahlukana kwaso sithambekele ekuphakamiseni izimpendulo ezigcwele. Isibonelo, ukusebenzisa le ndaba kudlule abanye ababambe iqhaza kule webhusayithi bakhiqize ama-imeyili we-58 ngezinsuku ezimbili nje; umgijimi olandelayo uphume kuphela i-26 esikhathini sezinsuku ze-22. Kuwo wonke lawo ma-imeyili, asifikanga ekubukeni kokuvumelana ngaphandle kokuthi uNkulunkulu wadala zonke izinto. Ngandlela thile.
Noma "uNkulunkulu wadala yonke into" kungabonakala kungacabangi kangako, ngokuqinisekile iphuzu elibaluleke kakhulu. UNkulunkulu angadala noma yini ayifunayo, noma iyiphi indlela ayifunayo. Singasho, singakwazi opine, kepha kunemikhawulo kulokho esingakusho ngokufanele. Ngakho-ke kumele sihlale sivulekele amathuba esingakawacubangi, noma mhlawumbe nokunye esivele sikwenqabile. Akufanele sizivumele ukuthi sibhejelwe noma sibanjiswe ngamajuba yizitatimende ezinjengezingcaphuno eziphuma kulo mbhalo.
Kepha iZwi likaNkulunkulu alilinganiseli inani lamathuba okufanele sicabange ngawo? Ingabe umKristu angayemukela inkolelo-mbono yokuziphendukela kwemvelo? Ngakolunye uhlangothi, kungaba umuntu ohlakaniphile, onolwazi wenqaba ukuziphendukela kwemvelo? Ake sibheke ukuthi singasondela yini kule ndaba ngaphandle kokubandlulula kwangaphambilini, ngenkathi sinikela ngaphandle kwesizathu noma ukuhlonipha uMdali wethu nezwi lakhe.
Ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba. 2Manje umhlaba wawungenakubukeka futhi ungenalutho, futhi ubumnyama babungaphezulu kobunzulu bamanzi, kepha uMoya kaNkulunkulu wayehamba ngaphezu kwamanzi. 3 UNkulunkulu wathi, “Makukhanye ukukhanya.” Kwakukhanya! 4 UNkulunkulu wabona ukuthi ukukhanya kuhle, ngakho uNkulunkulu wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. 5 UNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi “usuku” nobumnyama ngokuthi “ubusuku.” Kwakukhona kusihlwa, kwaba ngukusa, kwaba usuku lokuqala. (NET)
Sinegumbi elincane impela lapho lifika ngesikhathi, uma sifisa ukuzitholela lona. Okokuqala, kungenzeka ukuthi isitatimende esithi, "ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba" uhlukaniswe nezinsuku zokudala, ezizovumela ukuthi kube khona indawo yonke yeminyaka eyizigidi eziyizinkulungwane ezingama-13. Okwesibili kunethuba lokuthi izinsuku zokudala akuzona izinsuku zehora le-24, kepha izinkathi zobude obude. Okwesithathu, kungenzeka ukuthi banqwabelane, noma ukuthi kunezikhala zesikhathi - kuphinde kube, ngobude obungapheli - phakathi kwabo. Ngakho-ke, kungenzeka ukufunda uGenesise 1 futhi ufike esiphethweni esingaphezu kwesisodwa mayelana nobudala bendawo yonke, uMhlaba nokuphila eMhlabeni. Ngokuhumusha okuncane, asikwazanga ukuthola ukungaboni ngaso linye phakathi kukaGenesise 1 nesikhathi esibonisa ukuvumelana kwesayensi. Kodwa ingabe ukulandisa kokudalelwa kwempilo yasemhlabeni nakho kusinikeza ithuba lokukholelwa ekuziphendukeleni kwemvelo?
Ngaphambi kokuthi siphendule ukuthi, kudingeka sichaze ukuthi sisho ukuthini ngokuziphendukela kwemvelo, ngoba igama elikulesi simo linencazelo eminingana. Ake sigxile kulokhu okubili:
Shintsha ngokuhamba kwesikhathi ezintweni eziphilayo. Isibonelo, ama-trilobites eCambrian kodwa hhayi eJurassic; ama-dinosaurs eJurassic kodwa hhayi manje; onogwaja njengamanje, kodwa hhayi eJurassic noma eCambrian.
The akuqondisiwe (ngobuhlakani) inqubo wokuhlukahluka kofuzo nokukhethwa kwemvelo okucatshangwa ukuthi zonke izinto eziphilayo zivela kukhokho ojwayelekile. Le nqubo ibizwa nangokuthi yiNeo-Darwinian Evolution (NDE). I-NDE ivame ukwehlukaniswa i-micro-evolution (njengokufana kwe-finch beak noma ukumelana kwama-bacterium kwezidakamizwa) kanye nokuziphendukela kwemvelo okukhulu (kufana nokuhamba kusuka ku-quadruped to the whale).
Njengoba ukwazi ukubona, kunokuncane ongakuphikisa ngokuchazwa #1. Ukuchazwa #2, ngakolunye uhlangothi, kulapho ama-hazles abathembekile kwesinye isikhathi ephakama khona. Noma kunjalo, akuwona wonke amaKristu anenkinga ne-NDE, futhi abanye balabo abakwenzayo bayokwamukela imvelaphi evamile. Ngabe udidekile namanje?
Iningi lalabo abafisa ukuvumelanisa umbono wabo ngesayensi kanye nokholo lwabo lobuKristu bangena kolunye lwale mikhakha elandelayo:
Ukuvela Kweqiniso (TE): UNkulunkulu walayisha ngaphambili izimo ezidingekayo nezanele zokuvela kokugcina kwempilo endaweni yonke ekudalweni kwayo. Abameli be-TE bamukela i-NDE. Njengoba uDarrell Falk we biologos.org uyayifaka, “Izinqubo zemvelo ziwukubonakaliswa kobukhona bukaNkulunkulu obuqhubekayo endaweni yonke. Ubuhlakani engikholwa khona mina njengomKristu, bunjwe ohlelweni kusukela ekuqaleni, futhi butholakala ngomsebenzi kaNkulunkulu oqhubekayo obonakala ngemithetho yemvelo. ”
Umklamo ohlakaniphile (ID): Umkhathi nokuphila eMhlabeni kunikeza ubufakazi bokukhalipha okukhaliphile. Yize kungebona bonke abaxhasi be-ID abangamaKristu, lokho okukholelwa ngokujwayelekile ukuthi imvelaphi yempilo, kanye nezinye izehlakalo ezinkulu emlandweni wempilo, njengeCambrian Explosion, zibonisa ukukhuphuka kolwazi olungenakusetshenziswa ngaphandle kwesizathu esiqondayo. Abaxhasi be-ID bayenqaba i-NDE njengenganele ukuchaza umsuka wolwazi olusha lwebhayoloji. Ngokusho kweDiscovery Institute's incazelo esemthethweni, "Umbono wokuqanjwa ngokuqonda ukuthi izici ezithile zomkhathi nezinto zezinto eziphilayo zichazwe kangcono yisizathu esinengqondo, hhayi inqubo engaqondakali enjengokukhethwa kwemvelo."
Kunokuhlukahluka okukhulu kwinkolelo yomuntu ngamunye. Abanye bakholelwa ukuthi uNkulunkulu wadala isidalwa sokuqala eziphilayo ngolwazi olwanele (ithuluzi lokwenza izakhi zofuzo) ukuze kamuva siguqukele kuzo zonke ezinye izinhlobo zezinto eziphilayo ngaphandle kokungenela kwaphezulu. Lokhu, yiqiniso, kungaba yinto yokuhlelela kune-NDE. Abanye abahlaziyi be-ID bamukela imvelaphi evamile, kuthathwa inkinga nge-NDE kuphela. Isikhala asivumeli ukuxoxa ngakho konke ukubuka okungabakhona, ngakho-ke ngizozibekela umkhawulo ekubukeni okujwayelekile okungenhla. Abafundi kufanele bazizwe bekhululekile ukuhlanganyela imibono yabo engxenyeni yamazwana.
Labo abamukela i-NDE bavumelanisa kanjani umbono wabo ne-akhawunti kaGenesise? Ukwenza isibonelo, balithola kanjani ibinzana elithi “ngezinhlobo zabo”?
Ibhuku UKUPHILA — KWAKHONA KANJANI? NGOKUVANGELA NOMA NGOKUDALWA?, isahl. I-8 pp. 107-108 par. I-23, uthi:
Izinto eziphilayo zizala kuphela “ngezinhlobo zazo.” Isizathu ukuthi ikhodi yofuzo ivimba isitshalo noma isilwane ukuba sihambele kude kakhulu nesilinganiso. Kunokuhlukahluka okukhulu (njengoba kungabonakala, ngokwesibonelo, phakathi kwabantu, amakati noma izinja) kepha hhayi kangako ukuthi into eyodwa ephilayo ingashintsha ibe enye.
Kuvela ekusebenziseni amakati, izinja nabantu ukuthi ababhali baqonde ukuthi “izinhlobo” zilingana, okungenani, “ezinhlotsheni”. Izingqinamba zofuzo ekushintsheni ezikhulunywa ngababhali zingokoqobo, kepha singaqiniseka ngokuphelele ukuthi “uhlobo” lukaGenesise luyakhawulelwa? Cabanga ngokulandelana kokuhlukaniswa kwe-taxonomic:
Isizinda, uMbuso, iPhylum, iklasi, i-oda, umndeni, i-genus, kanye nezinhlobo.
Ngakho-ke, uGenesise ubhekisele kuluphi uhlelo? Ngaleyo ndaba, ingabe igama elithi “ngezinhlobo zazo” lisho ukuthini ngempela njengesimemezelo sesayensi esinquma amathuba okuzala kwezinto eziphilayo? Ngabe kukhipha umbandela wokuthi kungenzeka ukuthi izinto zizalwe kabusha ngezinhlobo zazo ngenkathi ziyavela kancane kancane - ngaphezulu kwezigidi zeminyaka - zibe izinhlobo ezintsha? Omunye waba neqhaza eforamu wayegcizelela ukuthi, uma umbhalo ungasiniki isisekelo esicacile sokuthi "cha", kufanele singabaze kakhulu ukuzibusa lezo zinto ngokwethu.
Okwamanje umfundi angahle azibuze ukuthi ngabe sizinikeza yini ngokunikela ngomdlandla welayisense yokuhumusha kangangokuba sinika lo mbhalo ophefumulelwe ngokwaphezulu ngokungenanjongo. Kuyinkinga evumelekile. Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi sesivele sizinike inkululeko ethile yokuhumusha uma kufikwa ekuqondeni ubude bezinsuku zokudala, okushiwo “izisekelo zesisekelo” somhlaba kanye nokuvela “kwezikhanyiso” ngosuku lwesine lokudala. Kudingeka sizibuze ukuthi sinecala eliphakeme uma siphikelela ekuhunyushweni kwegama elithi “izinhlobo” ngokweqile.
Njengoba sesithumele-ke ukuthi lowo mbhalo awunqunyelwe njengoba kungenzeka ukuthi sicabange, ake sibheke ezinye zezinkolelo esesikhulume ngazo kuze kube manje, kodwa kulokhu ngokubheka isayensi nokuqonda.
I-Neo-Darwinian Evolution: Ngenkathi lo kusewumbono othandwa kakhulu phakathi kososayensi (ikakhulukazi labo abafisa ukugcina imisebenzi yabo), inenkinga evame ukuqashelwa ngisho nososayensi abakholelwa kwezenkolo: Indlela yokuguquguquka / ukukhetha kwayo ayikwazi ukukhipha imininingwane entsha yezakhi zofuzo . Azikho kulezibonelo zakudala ze-NDE ezisebenzayo - ukuguquguquka ngosayizi woqhwaku noma umbala webhu, noma ukumelana kwamagciwane kwizidakamizwa, ngezibonelo ezimbalwa - kungenye into entsha ekhiqizwe. Ososayensi abenqabayo ukubheka ukuthi kungenzeka ukuthi kuvela ukuthi bahlakaniphile bazithola sebesungule ukuthola okusha, futhi okungaqondakali kangako, indlela yokuziphendukela kwemvelo ngenkathi begcina ngokukholelwa enkambisweni yokuziphendukela kwemvelo engaqondakali okholweni lokuthi inqubo enjalo empeleni iyeza.
Ukuvela Kweqiniso: Kimi, le ndlela imelela okubi kakhulu komhlaba womabili. Njengoba izazi zemfundiso yokuziphendukela kwemvelo zikholelwa ukuthi uNkulunkulu, ngemuva kokudala izulu nomhlaba, wasusa izandla zakhe, ngakho-ke, bakholelwa ukuthi ukubonakala kokuphila emhlabeni nokuziphendukela kwemvelo okwalandelayo zombili akuzange kuqondwe uNkulunkulu. Ngakho-ke, bazithola besengcupheni efanayo njengabakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona ekuchazeni imvelaphi nokuhluka okulandelayo kokuphila eMhlabeni ngokuya ngamathuba nemithetho yemvelo iyodwa. Futhi njengoba bemukela i-NDE, bazuza ifa lakho konke ukusilela kwayo. Okwamanje, uNkulunkulu uhlala ngokungemthetho eceleni kwendlela.
Umklamo ohlakaniphile: Kimi, lokhu kumelela isiphetho esinengqondo kunazo zonke: Ukuthi impilo kule planethi, nezinqubo zayo eziyinkimbinkimbi, eziqhutshwa imininingwane, kungaba ngumkhiqizo wobuhlakani bokuqamba kuphela, nokuthi ukuhlukaniswa okwalandelayo kubangelwe ukungena kwemininingwane yolwazi ngezikhathi ezithile i-biology, njengaseCambrian Explosion. Kuliqiniso, lo mbono awu- empeleni, Ayikwazi - khombisa umqambi, kepha unikeza into eqinile yesayensi empikiswaneni yefilosofi yobukhona bukaNkulunkulu.
Njengoba ngishilo ekuqaleni, lapho ababeneqhaza kule nkundla bexoxa ngale ndaba ekuqaleni, asikwazanga ukwakha umbono wokuvumelana. Ngangiqale ngashaqeka ngalokhu, kodwa sengicabanga ukuthi lokho kufanele kube njalo. Imibhalo vele ayicacisanga ngokwanele ukusivumela ukunethezeka kwe-dogmatism. Isazi semfundiso yenkolo yobuKristu uDarrel Falk kusho maqondana nezitha zakhe eziqondayo okholweni ukuthi "abaningi babo bahlanganyela ekukholweni kwami, ukholo oluqinile alugcinanga nje ekushintshaneni ngenhlonipho, kodwa uthando olusobala". Uma sikholwa ukuthi sadalwa uNkulunkulu nokuthi uKristu wanikela ngokuphila kwakhe njengesihlengo ukuze nathi sibe nokuphila okuphakade njengabantwana bakaNkulunkulu, umehluko kwezokuqonda Kanjani sadalwa asidingi ukusihlukanisa. Ukukholwa kwethu, ngemuva kwalokho, 'kusekelwe othandweni oluqondile'. Futhi sonke siyazi ukuthi kuphi ukuthi kwaqhamuka.
 Ukunikeza isikweletu lapho kudingeka khona isikweletu, okuningi okulandelayo kungukucwengeka kwemicabango eshintshwe kulolo cingo.
 Le ndatshana isebenzisa izigidigidi zaseMelika: 1,000,000,000.
 Ngokucatshangelwa okuningiliziwe ngezinsuku zokudala, ngincoma Izinsuku Eziyisikhombisa Ehlukanisa Umhlaba, nguJohn Lennox.
 Abanye abaxhasi bezokuziphendukela kwemvelo baphikisana nengcikitsi yangaphambilini kanye ne-macro, baphikisa ukuthi ukuziphendukela kwemvelo okukhulu kumane nje kuyinto "enkulu" yemvelo. Ukuzwisisa ukuthi kungani abanalo iphuzu, uyabona lapha.
 I-TE njengoba ngichaze lapha (igama kwesinye isikhathi lisetshenziswa ngendlela ehlukile) kuboniswa kahle isikhundla sikaFrancisco Ayala ku le mpikiswano (umbhalo lapha). Ngeshwa, i-ID ichazwe kahle nguWilliam Lane Craig kwinkulumompikiswano efanayo.
 Wikipedia Usisiza ukuthi lolu hlelo olusezingeni eliphezulu lungakhunjulwa yi-mnemonic ethi "Ingabe Amakhosi Ayadlala Ama-Chess On Fine Glass Sets?
 Ezigabeni ezintathu ezilandelayo ngikhuluma ngedwa.
 Ukwenza isibonelo, bheka lapha.
← Isifundo Se-WT: Singabonisa Kanjani Ukuthi Siyamthanda UJehova?Umgomo wethu wokuphawula →
15 Izintambo zamazwana
39 Izimpendulo zemibuzo
36 Abalobi be-Comment
Ingabe ukhona owake waba ngamehlo wokuziphendukela kwemvelo? Angicabangi ukuthi ukuziphendukela kwemvelo kwenzeka izigidi zeminyaka edlule. Ngabe ukhona oke wabona "ukukhethwa kwemvelo" kwenzeka? Yebo, nsuku zonke. UCharles Darwin wayengadingi ukuya eGalapagos Islands ukuyofakazela ukukhetha kwendalo. Ukuhlolwa akwenzayo esivandeni sakhe ekhaya kwanele ukufakazela ubukhona bokukhethwa kwemvelo. Nathi njengabantu silwa nokukhethwa kwemvelo nsuku zonke ngoba ukukhethwa kwemvelo kusongela ubukhona bethu. Liyini iphuzu lami? Ukukhetha kwemvelo iqiniso, ukuziphendukela kwemvelo kuseyinkolelo-mbono ngombono wami.
Indaba efanayo yakudala nalo mbuzo .Cishe abaningi bekufanele bayivume, thina asisosayensi. Asizibonanga mathupha ubufakazi besayensi bokuziphendukela kwemvelo. Kungathatha ingqondo yesayensi eqeqeshiwe ukuthi uqonde ngisho nokuthi isayensi ikhuluma ngani. Bengikhuluma nomngani wami ngale ndaba ngobunye ubusuku athi akakholelwa kunkulunkulu. Akunangqondo kuye ngoba ubesekhempini futhi wabona nezenzo ezinconywa ngamadoda zibhekise kwabanye futhi ucabanga ukuthi izimpi eziningi zibangelwa inkolo yilabo abathi bakholelwa kunkulunkulu. Lowo ngubufakazi abubonayo. Kodwa-ke ngizwa kunengqondo enkulu ukukholelwa kunkulunkulu naphezu kwalawa maqiniso. Akubonakali kunengqondo ukukholelwa ukuthi into engekho ephilayo yavele yaba yinto ephilayo ngaphandle kosizo lwamandla angaphandle. Noma ososayensi bekwazi ukukhiqiza lo mcimbi ekukhonzeni izisebenzi, lokho kuzovele kufakazele ukuthi umdali uyadingeka ukuze aqale phansi.
Ukuziphendukela kwemvelo akunakufakazelwa. Kumele yamukelwe okholweni, njengoba nje ukuba khona komdali ohlakaniphile kufanele kwamukelwe okholweni. Izazi zebhayoloji zithanda ukusho ukuthi zinobufakazi obuningi, ngoba izingcezu ezithile zamathambo zibonakala zifana nezinye kusukela kudala, noma ngoba umbuso wezilwane eziningi namuhla unezinhlaka nezinhlelo ezifanayo. Lokhu kungaba kalula nje ngoba umsunguli uthandile umqondo wokwenza izinhlobo eziningi ezinhlobonhlobo zisebenzisa amafomu afanayo, njengokuhluka kusihloko esivamile. Akekho ongafakazela ukuthi lesi akusona isizathu, futhi ukufakazela okuthile kuyiqiniso kufanele ubonise ukuthi ayikho enye incazelo ebonakalayo engenzeka. Akekho ongabaza ukuthi ukukhethwa kwemvelo kwenzeka emvelweni. Lokhu kumane kukhiqizwa kwezinhlobo zabantu okuvaliwe. Lokhu kwenzeka kanjani ukudala izinhlobo eziningi kangaka zezinja, noma izinhlanga zabantu, noma ukuthuthuka ezitshalweni zasemapulazini. Ngokuhamba kwesikhathi inani labantu elivalekile lizokhombisa izakhiwo ezikhethekile ezizobenza babukeke behlukile kubantu bonke. Kepha azikho izinhlobo ezintsha ezakhiwa ngale ndlela. Zonke izinja zisakwazi ukuzinyanisa, futhi uma izintambo zegazi zingalawulwa zigcina zifana futhi. Izintambo nezimfudu izazi zesayensi yezinto eziphilayo ezithanda ukukhuluma ngalo (isisekelo semibono kaDarwin, azikhulisa ngemuva kokuhambela iziqhingi zaseGalapagos) akuzona izinhlobo ezintsha. Ziseyimicibisholo nezimfudu, futhi zingalahlekelwa umahluko wazo uma zivunyelwe ukungcwatshana namanani amnyama nezimfudu. Kepha bona... Funda kabanzi "
E-1971 nginqume ukubhapathizwa emhlanganweni wesigodi ngineminyaka engu-9 ubudala. Ukukholelwa kwami ​​endabeni yokudala kwakuphelele, futhi ngokujabulisayo, nganginesifiso esijwayelekile kwisayensi. Bengikufunda ngentshiseko izincwadi zesayensi ezikumagazini i-Phaphama, i-National Geographics kanye nanoma yiziphi izihloko zezindaba engingazithola ngohambo luka-Apollo. Ebangeni lesihlanu ngathola amaqiniso wesayensi kanye nemibono efana nesiponji. Ilukuluku lami lokwazi ukuthi umhlaba usebenze kanjani lingeneliseki. Uthisha wami wesayensi wayejabulela ukuba nami ekilasini ngoba ngaso sonke isikhathi ngangingumfundi onomdlandla. Ngenkathi uthisha ethula inkolelo-mbono yokuziphendukela kwemvelo ngacabanga ukuthi leli kungaba yithuba elihle kimi lokwethula indaba yendalo. Ngatshela ikilasi ukuthi ososayensi babenephutha elibuhlungu, mhlawumbe ngoba ideveli libakhohlisile, ngabatshela ukuthi umhlaba nomhlaba wenziwe ngendlela eyiyo eminyakeni eyizinkulungwane eziyisithupha edlule nokuthi ukuphela sekusondele, futhi ngangizimisele kakhulu ukufunda nanoma ngubani owayefuna ukwazi “iqiniso.” Ekuqaleni uthisha wami wangibekezelela, wangivumela ukuba ngiveze imibono yami. Kepha umbono wakhe ngami washintsha ngemuva kokuba ngiphazamise kaningi inkulumo yakhe “namaqiniso eBhayibheli.” Ngesinye isikhathi, wangitshela ukuthi ngivaleleke ngoba ngangingamvumeli ukuba asho amazwi ambalwa ngaphandle kokumphazamisa. Engangifunda nabo bangibuka bemangele ngoba ngangiphonsela inselelo igunya lothisha. Ngezwa sengathi nginayo... Funda kabanzi "
Ngiyabonga, SoT, ngokwabelana ngesipiliyoni sakho nathi. Ngicabanga ukuthi iningi lethu lapha liyazisola ngokukholwa futhi lashumayela izinto esizibona manje zingamanga. Sisezinhlelweni eziqhubekayo zokuthuthukisa 'amandla ethu okucabanga' kanye 'nokwenza izingqondo zethu zidlule'. Kunezinto ezimbalwa ozishilo, noma kunjalo, okufanele ngibe nazo ngezinkinga:
Ama-JWs awakaze afundise ukuthi umhlaba ungaphansi kweminyaka engu-10,000, noma ukuthi ilanga lidaliwe ngemuva komhlaba.
Futhi, isimilo senkolo - ikakhulukazi ubuKristu - njengesitha esingapheli sesayensi singathandwa kakhulu kwezemfundo, kodwa futhi ngamanga aphelele. Unkulunkulu ongumqambi wobuKristu nomuntu onengqondo futhi ugqugquzele ososayensi abanjengoIsaac Newton noGalileo ukuba balindele, bafune futhi ekugcineni bathole imithetho engaphathekiyo elawula indawo yonke. Eqinisweni, kuye kwaqokwa ukuthi ibhizinisi lesayensi lichuma ezweni lobuKristu ngokufanelekile ngenxa yokuthi - futhi nakanjani alikho naphezu kobuKristu. Ngakho-ke, akunakuthiwa ukuthuthuka okuqhutshwa yisayensi kuzinga lempilo yethu.
Noma ngubani onentshisekelo, Izizathu Zokukholelwa iyinsiza enhle kakhulu esekwe kwisayensi yokuvumelanisa isayensi kanye nemibhalo (HAYI Encane Earth !!!) Njengoba i-Creation neBhayibheli kuyizincwadi zombili zikaNkulunkulu, kufanele zivumelane uma sizifunda kahle. UChris waletha iphuzu ebengicabanga nalo ngokulandelana kwezikhathi zika-Adamu okukhulunywa ngakho kulesi sihloko kwiRevenue to Believe, okufushane ngokuthi uhlu lozalo aluphelele ngakho-ke akufanele sibeke ukulandelana kwezikhathi kubo. http://www.reasons.org/articles/q-a-does-the-gobekli-tepe-site-contradict-the-biblical-account-of-man
Ngiyabonga ngendatshana yakho enhle.
Enye yezingqinamba ezinzima kakhulu zamangqamuzana obonisayo ukukhombisa ukuthi ukufakwa kwamakhodi amaphrotheni okusha kuqinisekisa kanjani ukusinda nokukhiqizwa kabusha ngaphandle kokudinga ama-receptors amasha amaprotheni. Leyo mininingwane ebhekele ukuguqulwa kwama-phylogenetic kwezinto eziphilayo ezikhona, kanye ne-morphogenesis yezintsha, nganoma iyiphi indlela ebalulekile yokuthola isikwetho uhlelo lwezinto eziphilayo akunangqondo ngokweqiniso - okungenani, hhayi ngaphandle kokuhambisana nokukhambelana ngokulinganayo kwemodi yokuqamba. Ngeshwa, le khompiyutha ye-bootstriling ivimbela ukwakheka okujwayelekile kweDarwin kusuka kuwo wonke ama-quadrant futhi iwunikeze ngaphezulu komdlalo wokucabanga wama-amateur kunowomdlalo wokuphetha ezifundweni ovame ukuba nawo.
Ukwethulwa kanye nokuhlangana kwemininingwane esebenzayo ku-biology bekulokhu kungundlovu egumbini. Cha, hhayi indlovu emhlophe, kepha inkunzi evutha bhe yase-Afrika okungekho mlandeli wemvelo noma wesimanjemanje ophendukile okwazile ukumelana nayo. Vele, lokho akubavimbanga ekuthengiseni uhambo lwabo emphakathini.
Ngikholwa ukuthi unokuthile okubalulekile ongasidlulisela kithi. Uma ukwazi ukubhala kabusha lokhu ngolimi olutholakala kalula, uzofinyelela izithameli ezikhulu ngokuqonda kwakho.
Sawubona Ongaziwa, Ukuxolisa. Sekuyiminyaka ngingene ezincwadini zale mpikiswano futhi kungenzeka ukuthi sekuyangikhathaza manje. Inkinga ethile ebengishayela kuyona ukuthi ulwazi olufakiwe olusetshenzisiwe kumele luhunyushwe ngaphambi kokuvela kokuhlukahluka kwe-phenotypic (ukuguqulwa ngaphakathi kohlobo lwezinto eziphilayo). Kodwa-ke, ulwazi olusha olufakiwe olufakiwe alumisiwe kuphela, kepha kufanele luhunyushwe. Kusho ukuthini lokhu ukuthi imininingwane emisha idinga ukuhunyushwa ngaphambi kokuba inikezwe noma iyiphi inzuzo ekhethiwe. Kepha maye, njengoba imininingwane entsha idinga umhumushi omusha, nomuntu ohumusha omusha edinga imininingwane emisha - yona uqobo okumele ihunyushwe - khona-ke inkinga yokuqothula esezingeni lamangqamuzana kufanele ixazululwe ngalo lonke uhlobo lokufaka olusha olusebenzayo ku-biosphere. Ngaphezu kwalokho, njengoba imininingwane emisha idlulisela incazelo entsha kufanele samukele ukuthi ukuziphendukela kwemvelo okungaqondakali kuyakwazi ukuqonda okuqukethwe okunemininingwane yolwazi olufakiwe futhi ukukuqonda ngokunenhloso. Kunombono ojwayelekile oqondile wokuthi ukuziphendukela kwemvelo kumane nje kuyindlela eyingqayizivele yokubhala incwadi. Njengoba izinzuzo ezintsha zidluliselwa kumzimba womzimba bese kufakwa izinhlamvu ezintsha eziholela ezigabeni ezintsha eziholela ezahlukweni ezintsha eziholela ezincwadini ezintsha. Lesi isifaniso esibi. Umuntu onamaqiniso ngokwengeziwe, yize kunjalo engahlanzekile, ukuthi njengoba kunezelwa izinhlamvu ezintsha (noma, kungenzeka kususwe) noma yiziphi izigaba ezintsha zinciphisa okuqukethwe okusebenzayo kokudideka nokuhumusha abahumushi be-molecule abakhona kuze kube isikhathi lapho enye incwadi ibhaliwe - eyodwa echaza... Funda kabanzi "
Vox, nansi amanye amagama nezinkulumo owasebenzisile:
ama-protein decoding receptors
synthesis Darwinian standard
ukuhlangana kolwazi olusebenzayo ku-biosphere
Bese kuba nalokhu okunomlomo:
ukuziphendukela kwemvelo okuyimpumputhe kuyakwazi ukuqonda okuqukethwe okunganekwanga kolwazi olufakiwe futhi ukuluhlole ngenhloso
Ngiyaqiniseka ukuthi kunokuthile okuwusizo okudingidwayo ngakho, kodwa angikwazi ukuthi empilweni yami ngikuqonde ukuthi lokho kuyini. Udinga ukukuhlelela kabusha lokhu ngendlela engabeki ukuthi abafundi bakho bangongoti kwebhayiloji yamangqamuzana, kepha ababukeli nje abanentshisekelo kwinkulumompikiswano yendalo / yokuziphendukela kwemvelo. Nginovalo lokuthi ngikhulumela iningi labantu lapha bethi asikwazi ukukuqonda. Uyacelwa ukuthi ukwenze lula lokhu, futhi uchaze amagama obuchwepheshe owasebenzisayo ukuze umuntu ofundile onesizathu akwazi ukuwaqonda. Ngiyabonga kusengaphambili.
Ngithathe izincomo zakho. Siyabonga ngempendulo.
Bengihlanganisa kafishane ukuchaza enye ye-verbiage eye yajikijeleka ngaphakathi ekampini yaseDarwin lapho kwenzeka kimi ukuthi lesi simo siyisibonelo sangempela somhlaba wangempela wendaba engizame ukuyichaza (engaphumelelanga) ukuyichaza. Okungukuthi, lolo lwazi olusha olusebenzayo (lokho okudlulisela okushiwo ngokusebenza) kusuka kumthombo owodwa ngeke kuqondwe yi-receptor ngaphandle kokuthi kuqala kudilizwe bese kuhunyushwa ngenhloso. Uma ama-ejenti ahlakaniphile engenakusebenza ngempumelelo ngolwazi olungachazwanga, yiliphi ithuba amathuba emvelo okuvela kuwo angenziwa? Ngempela, lezo zinhloso "eziqondiswa ngumqondo" zilwa kanzima ukuze zisebenzise ukusetshenziswa kwe-datha (yencazelo engokomfanekiso) yedatha, kungashiwo kanjani ukuthi amabutho "angaqondakali" angasebenza kangcono?
Kubukeka sengathi engiyehluleka ukusho kungenzeka ngethemba ukuthi kungaqondakala kangcono uma kukhonjiswa.
Kulungile, ake ngizame ukuhumusha lokhu, futhi ungitshele uma nginembile. (Futhi, ungibekezelele; ukuqonda kwami ​​iDNA njll. Kunqunyelwe kakhulu.) Uma i-molecule ethile (i-DNA, i-RNA, amaprotheni noma enye) ibingashintsha (kucatshangwa, iguqukele kwifomu eliyinkimbinkimbi) kangangokuba bekukhona okuningi ' imininingwane 'efakwe ngaphakathi kwe-molecule, kungasho ukuthi amakhemikhali abenolwazi olusha, oluthuthukisiwe' lwezici 'angazange abenalo phambilini. Ukube lelo khemikhali belimane nje liyinto “emi yodwa” engasebenza ngokuzimele kwezinye izinto esitokisini esiphilayo, ukuguquka okunjalo bekungaba kuhle. Kepha iqiniso ukuthi izinto zamakhemikhali esitokisini aziveli ngokuzimele komunye nomunye. Bonke bakhona ngesizathu esithile. Ngomqondo wamangqamuzana, ngaphakathi esitokisini, "akekho umuntu oyisiqhingi". Isibonelo, uma i-DNA yeseli iguqukile, i-RNA yayo kufanele iguquke futhi, ngoba lezi zinto zombili zisebenza ngokubambisana lapho iDNA ne-RNA besebenzisana ekwakheni amaprotheni ukwenza iseli lisebenze. Kepha, noma yiluphi ushintsho kwi-DNA oludale noma yiluphi uhlobo loshintsho oluwusizo kungaba, ngokwemvelo yalo uqobo, lube yinkimbinkimbi yokuhlela kabusha kwe-molecule ye-DNA uqobo, okubandakanya izinguquko ezingeni le-athomu. Ngomqondo othile, i-'blueeprint 'noma i-database yokwakha "iguquliwe. Ukuze i-RNA iqhubeke nokwenza umsebenzi odinga ukuwenza, IT kuzodingeka iguqulwe ngasikhathi sinye - kodwa, akumele iguqulwe kuphela, kepha iguqulwe... Funda kabanzi "
Kuhle! Angikwazanga ukusho kangcono (futhi ngokusobala angizishongo) mina.
Imifanekiso emihle kakhulu. Ngiyathemba ukuthi ngeke ukhathazeke uma ngiyintshontsha
Uma zingosizo, yeba :-))
Angisiye umKristu kodwa ngakhubeka kulesi siza ngenxa yesihloko.Ngineziqu ezesayensi futhi ngigqamile kwi-biology. Ngifuna ukusho ukuthi ngiyithokozisile impela ingxoxo phakathi kweTRA neVox. Yindlela enhle kabi yokubhidliza imininingwane. Thina esazi lolu lwazi asiboni ukuthi abantu abaningi abazi ulimi olukhethekile esilusebenzisayo ukuchaza izehlakalo zemvelo. Ngizosebenzisa lokho nonke enikwenzile nje futhi ngifunde ukuchaza imininingwane yesayensi ngendlela abantu abangenalo ulwazi lwesayensi abangaqonda ngayo. Ngikholwa ukuthi yingakho abaningi ensimini yami bethukuthela lapho abanye bengavumi, kepha akukhona ukuthi abavumi, ukuthi abaningi abaluqondi ulimi, kuyinkinga yokuxhumana. Ngiyijabulele kakhulu le ngxoxo, empeleni ingaphezu kwesihloko.
Impela, futhi singathatha lokhu njengethuba lokucebisa ulwazimagama lwethu ngokusebenzisa enye yezinsizakusebenza eziningi online futhi okungekho- ukuthi unyaka wolwazi wenze ukutholakala kalula kangaka. 🙂
Ngiyavuma ngenhliziyo yonke. Akukho lutho olungahambi kahle ngokuguqulwa kwesilulumagama sesayensi esisisekelo. Kungangeza ukuthembeka kungxabano (inqobo nje uma isetshenziswa kahle).
Ngempela. Uma ungakhulumi 'ukukhuluma okusobala lwesiNgisi lapha! Angize lapha ukuzothuthukisa ulwazimagama lwami olokwehlisa isithunzi futhi olubonwa ukuphakamisa.
Ngidlula konke ukuphawula kweVox ngalesosizathu. Angihlabe umxhwele indlela umuntu afunda ngayo. Ngingaphetha nje ukuthi sonke ngabe siyinyama efile uma uJesu ekhuluma ngaleyondlela. Ngingaqhubeka ngokuthi wonke umuntu usho ukuthini ngokomoya wothando, kepha, ngiyaxolisa ukuthi uhlobo olunjalo lwe-WT condescension luza ama-hazles ami.
Ngenhlonipho efanele. JJ
Ekushintshisaneni kwethu kwangaphambilini bengikuqonda ukuthi ungumuntu owaziyo ukuthi yini abayikholelwayo nokuthi kungani bekukholelwa. Wenze icala elithembekile lezimpikiswano zakho, wabandakanyeka, futhi waxhumana kakhulu nokufanele engikushoyo. Noma singagcinanga sivumelana ngakho konke, kwabonakala kimi ukuthi izingxoxo zethu zazinobuhle futhi ekugcineni zakha.
Kodwa-ke, ngokunikezwa kokuvuma kwakho kwakamuva ukuthi "udlula" konke ukuphawula kwami ​​manje, mhlawumbe bekuyimi ngedwa ekucabangeni kwami ​​ngalokhu. Vele, ukhululekile ukufunda noma yini oyifisayo - leyo ngenye yezinzuzo zokuthi ungasanqunyelwa ekuphenyweni komuntu.
Noma kunjalo, ngaphandle kokuthi ngenze iphutha lokuqukethwe kweposi lakho lakamuva, kubonakala sengathi uzizwe wehlisiwe noma uncishisiwe ezinye zezinto okungenzeka ukuthi sengizishilo. Impela lokho akukaze kube inhloso yami, futhi kungiphatha kabi ukucabanga ukuthi kungenzeka ngibe ngakhubekisa othile ngamabomu, noma ngathintela ukucela kwabo kunokuba ngisize. Uma kunjalo, ngicela ungivumele ukuthi ngikwenzele igatsha lomnqumo. Ngingaba umuntu onokwethenjelwa kakhulu engimaziyo, kepha sonke singabafowethu lapha, futhi ngingahle ngibe nobunye kini kuKristu kunokuba ngihlukaniswe nobunzima.
Ekupheleni kosuku sonke sihlukile. Ngithi ngiyabonga nge-vox yokuqonda.
Hahaha yebo. Isilinganiso se-vox. Uma ungakusa phansi ku-notch kuya ku-CSE grade 3 english ngikwazi ukuqonda. Kuthiwani ngawe mayelana hahaha.
Bengikhuluma ngale ndaba nomunye umuntu ngolunye usuku. Ngathi uma uNkulunkulu edala u-Adamu 6000 eminyakeni eyedlule ngokulandelana kwezikhathi zebhayibheli futhi kukhona izinsalela zabantu abavela kuma-30,000 eminyakeni edlule lokho kusho ukuthi ukufa kwakukhona ngaphambi kokuba u-Adamu ona nokuthi u-Adamu wayengeyena umuntu wokuqala ukuba aphile.
Kepha umbuzo. Sikubheka kanjani izinsalela zezinsimbi ezibukeka ezihluke kakhulu kunalezo esinazo namuhla? Umsoco? Ukukhetha kwemvelo.
Ngiye ngabheka kaningi ukuthi kungenzeka ukuthi amaNeanderthal empeleni ayengamaNefili ashiwo kuGenesise. Yini esiyaziyo ngamaNefili? Kwakuyinzalo ehlanganisiwe yezingelosi nabantu. Igama lisho ukuthi, 'labo ababangela abanye bawe phansi'; ngamanye amazwi, iziqhwaga. Lokho kudalwa ukuthi umhlaba wangaphambi kukaZamcolo uchazwa njengodlame kakhulu. Lokhu kunengqondo; uma ingelosi ibingazenza umuntu njengomuntu ngenhloso yokuthatha “izintambo”, ibizovela ngesimo esiphakeme ngokwasemzimbeni. Amathambo eNanderthal awakhombisa ukuthi anezithuthu ezikhudlwana kunalokho abantu abanakho, futhi amathambo abo mikhulu futhi anzima. Lokho kungasho ukuthi bangacabanga futhi basebenzise umuntu ojwayelekile - izimo ezibonakala zinomsila owenzelwe ukuthi babe phezulu njengababusi bezwe elinodlame. Ngaphezu kwalokho, i-Neanderthal DNA idaluliwe, futhi kuyaziwa ukuthi iningi, kepha hhayi ngokuphelele, ngabantu. Ekugcineni, izinsalela zeNeanderthal azindala kakhulu. Kulinganiselwa ukuthi bashona kuphela eminyakeni ethile ye-30,000 eyedlule (ngiyakholelwa, kuzofanela ngiqinisekise leso sikhathi). Njengoba kunikezwe ukuthi ukunemba kokuthandana kwezidala zasendulo kuncike ekungaqiniseki okuthile, kuvula ithuba lokuthi iningi lalawa maNeanderthal ayephila ngaphambi kwesikhukhula, ngokusobala lisakazeka lisuka maphakathi nasempumalanga liye eYurophu ngaphambi kokuba liphume. Ngiqinisekile ngokuphelele ngalokhu? Cha, kepha kubonakala sengathi kungenzeka.
Konke okuphakamisayo kungenzeka kube yiso leso. Kodwa-ke uma amaNeanderthals ayengumphumela wokuxhumana phakathi kwabantu namademoni, kepha waphila iminyaka engu-30,000 edlule ukuphi lokhu kusishiya maqondana nokubala kwezikhathi kwebhayibheli. Ukube baphila ngaphambi kuka-Adamu, manje wayengaba kanjani umuntu wokuqala? Futhi, njengoba uChristopher ebuza ukuthi baphila futhi bafa ngaphambi kuka-Adamu, kufanele ngabe bafa ngaphambi kwakhe. Kodwa ibhayibheli lifaka icala lokwethula ukufa emahlombe ka-Adamu. Yini engiyilahlelayo lapha?
Ngizofanela ukugcizelela ukuthi lokhu konke ukuqagela, kunjalo, kepha isihluthulelo sikuGenesise. Kusho ukuthi lesi sehlakalo senzeka ngemuva kuka-Adamu kodwa ngaphambi kukazamcolo. Kungenzeka kanjani lokho, uma amaNeanderthals eneminyaka engu-30,000 ubudala? Impendulo iwukuthi, abayisindala kangako. Singawubuyisela kanjani umehluko wesikhathi? Okokuqala, izindlela ezahlukahlukene zokuqomisana azilungile njengoba singase sicabange. Kepha okwesibili, futhi okubaluleke kakhulu, uma samukela ukulandisa kukaGenesise ukuthi kunokukhanya kombhobho phezu komhlaba, lokho kukhanya bekunganikeza isihlangu esihle kakhulu semisebe somhlaba, kakhulu ukwedlula umkhathi wethu nezigxobo zikazibuthe ezikwenza wedwa. Ngoba izinto eziphilayo zizobe zithola imisebe ephansi kakhulu kunalena esiyenzayo namuhla, zizovezwa ngaphansi kwe-C 14 engaphansi. Lokho kungenza izinsalela ezitholakalayo zibukeke zindala kakhulu kunalokho eziyikho ngempela, ngokususelwa kumazinga wazo we-C 14.
Ngokuphathelene nombono othi "Canopy". Vele i-FYI. 🙂
Siyabonga ngokwabelana ngalokho, uSusan.
Kunama-engeli amaningi okufanele uwacabangele, akunjalo? 🙂
Kuzwakala ngokusemthethweni. Ngabuka ividiyo yesayensi muva nje yathi uma abantu bephila isikhathi eside bekuzoba nokuvela kwamathambo wamehlo ebunzini. Hhayi-ke uma abantu bebeneminyaka eyikhulu yeminyaka yokuphilwa kwempilo kukhona imbangela yezici zobuso esizibona kumaNeanderthals.
Kukhona ividiyo emangazayo mayelana namahora we-2 abizwa ngokuthi i-100 izizathu zokuthi kungani ukuziphendukela kwemvelo kuyisiwula. Kuyadabukisa. Vele i-YouTube.
Ngikuqaphela ucaphuna encwadini ethi Creation. Leyo ncwadi iqukethe 'izingcaphuno' eziningana zososayensi ezihlushwe ukuze zivumelane nokuqagela kombhali- uRichard Dawkins ngokwakhe kuthungelwe kabi. Elinye 'igunya' abalicaphuna kaninginingi nguFrancis Hitching. Ukusesha kwe-google okusheshayo kumveza ukuthi uyi-charlatan. Ngokubona kwami, incwadi ye-Creation inqunyelwa ngokuphelele njengencwadi ongayicaphuna kuyo.
Ngeshwa, ukushicilelwa kwe-WT kugcwele okungaqondile kusuka kososayensi nakwisazi-mlando- kubonakala sengathi bazosebenzisa lokhu ukuze 'bafakazele' iphuzu labo kunoma yisiphi isihloko esinikeziwe. Bayazi iningi lama-JWs ngeke licwaninge ukunemba kwezingcaphuno zabo, njengoba benqatshelwe ukwenza njalo nge-GB.
Kuyavuza ukukhumbula ukuthi ukuziphendukela kwemvelo kuthulekile endabeni yokuthi impilo yaqala kanjani, ebizwa nge-Abiogeneis
Imvelaphi yokuhlukahluka okulandelayo kwempilo kuyizingqinamba ezimbili ezihlukene, kepha abantu ezinhlangothini zombili zenkinga bavame ukufiphaza umehluko. Ukuxolisa kwami ​​uma bengingakucacisanga lokho. Abiogeneis, sitshelwa (Ngomthombo othembeke kakhulu kunayo yonke imithombo, i-Wikipedia), "yinqubo yemvelo yokuphila evela ezintweni ezingaphili, njengezihlanganisela ezilula zezinto eziphilayo". Ngakho-ke akukuningi "ukuthi impilo yaqala kanjani" njengomqondo wokuthi impilo ivela kokungaphili ngaphandle kosizo lomenzi. Akunakusho ukuthi, isazokhonjiswa ngangokunokwenzeka.
Mayelana nesilinganiso sencwadi ye-Creation, ngiyisebenzisile ngoba isibonisa umbono ovame kakhulu maqondana “nezinhlobo” zikaGenesise, ikakhulukazi phakathi kwama-JWs. Uzoqaphela, nokho, ukuthi angizange ngiyisebenzise ukuxhasa noma yiziphi izimangalo zesayensi.
Kuningi futhi okungashiwo ngesihloko esithi "ukuxakaxeka okungenakuqondakala". Le ndaba ivame ukuphendulwa ngokuthukwa yilabo abakholelwa ekuziphendukeleni kwemvelo, ngokungangabazeki ngoba akuyona ingxabano engenamqondo futhi ayinakuphikwa kalula. Nginomuzwa wokuthi le ngxabano inobuhle obukhulu. Thatha izibonelo ezimbili. Sinohlelo oluhle kakhulu lokugcona kwegazi. Ukuvala umlomo kuvimbela ukulimala kungaholela ekulahlekelweni kwegazi okukhulu nokufa. Kubaluleke kakhulu - ukusindisa impilo. Kuyigugu elikhulu, kunzima ukucabanga ukuthi ungaphila ngaphandle kwalo. Kepha, ake ucabange nje, kufanele ukuthi ngabe savela, ngoba ngokuqinisekile bekufanele kube khona iphuzu ekuziphendukeleni kwethu lapho singenalo uhlelo lokugcwala kwegazi “phezulu nokugijima”. Lokhu kuyawubuza ngempela lo mbuzo: Uma singasinda ngaphambi kwesikhathi ngaphandle kohlelo lokugcotshwa kwegazi, imaphi amandla okuziphendukela kwemvelo angasishukumisela ukuba siqhamuke nelinye? Futhi uma besidinga uhlelo lokufaka igazi - kepha singenalo - singaphila kanjani isikhathi eside ngokwanele ukuba siguqule esisodwa, ngaphandle kwabo bonke abantu abasanda kugcotshwa bavele bafa kuqala? Kufanele futhi sicabangele ukuthi ukugcotshwa kwegazi njengendlela yokusebenza komzimba kuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe. Uma inqubo yokujaha ibuthakathaka kakhulu, ama-clots ngeke abekhona futhi sopha saze safa. Uma inqubo inamandla kakhulu, ukugoba kuyakheka lapho kungadingeki, futhi nasezindaweni ezingalungile, kuvame ukuholela imivimbo, ukushaya kwenhliziyo nokufa. Uhlelo lwethu lokugqoka lwenziwe kahle futhi lwenziwe kahle. Kukhona “iwindi” elincane kakhulu ngaphakathi elisebenza kahle futhi livikele... Funda kabanzi "
Ngiyasithanda lesi sihloko, uma uletha lokhu okudala noMdala noma i-CO noma umnakekeli we-Doctrine person,… .Bheka ukuthola uhlelo lwelanga ukuze uphonseke ekhanda lakho… (PS Nginesiqiniseko impela ukuthi akunangqondo), kodwa yebo ngiyakholelwa ekudaleni njengoba kusho ibhayibheli, kodwa sonke siyazi ukuthi ibhayibheli alisho lutho oluningi.
Manje ngikholwa ukuthi sonke savela isikhathi esengeziwe, ngiqonde ukuthi ngabona ipaki leJurassic kanti zonke izinyoni zivela ohlwini lwamadayinaso, futhi kubukeka ngathi sonke sikhula futhi savela ngokuhamba kwesikhathi, ngisebenzisa lo msebenzi nomngane wengqondo yami e Sebenzisa umsebenzi ukuze ukhulume nami, futhi saba nezingxoxo ezinhle ngokuziphendukela kwemvelo nezinto ezinjengaleyo, kwakumangalisa kakhulu, kuphinde kube seqophelweni ukuzama ukuletha lokho emhlanganweni wangakini, / esontweni, / noma ebusuku bible, izinto zingahle zixake futhi abantu babeqala ukuthukuthela.
Ngiyakuthanda ukuthi uma ucabanga ngakho uC. T. Russell wacabanga ukuthi konke lokhu kukhula kwezobuchwepheshe kanye nezinto ezisezweni ezikhulayo kwakuyisibonakaliso sokuthi uJesu wayekhona njengeNkosi kusukela nge1878… .Izikhathi zakho zeJws azivelanga kangako ngokuhlanekezela imibhalo kanye nesiprofetho…. :)
Uthando kubo bonke kusuka kuBuster
Umngani wami u-1874, ubukhona bakhe besibili kepha i-1878 kulapho eyinkosi khona kungani unyaka we-4 ulindile, ngubani owaziyo… kepha khumbula umngani wami u-Old Light uhlala eshintsha… .Right!
I-athikili yendatshana u-Andere, ukubuka konke okunengqondo kakhulu futhi okunengqondo. Ukuziphendukela kwemvelo kungenye yezinkinga engangilwa nazo ngisemncane, ikakhulukazi njengoba nganginobaba ongakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona (notshwala) futhi wakhulela ekudleni kukaDavid Attenborough noRichard Dawkins. Kunezizathu eziningi zokungakholelwa ekuziphendukeleni kwemvelo futhi ngikholelwa ku-Intelligent Design, engabhala incwadi kuyo, kodwa ngiyaqiniseka ukuthi zonke zenziwe ezimpikiswaneni nasemisebenzini egunyaziwe kakhulu kwenye indawo. Engilokhu ngibuyela emuva kuyimvelaphi yokuhlukahluka kofuzo. Ngabe konke kwavelaphi uma impilo ivela esitokisini esisodwa? Ikakhulu uma ubheka usizi lwezilwane ezinjengeNorth White Rhino nabanye abaningi abathandayo. Siyaqaphela ukuthi lapho izinombolo zezinhlobo zehla ngaphansi komkhawulo othile zikulayini wokufa, ngoba akukho ukwehluka okwanele echibini lezinhlobo zokuphinda ziphendule ngaphandle kwazo zonke izinkinga zokuzala kanye nokuzalanisa. Siyakwemukela lokho namuhla, kepha ingabe siyakhipha lokho emuva? Vele, izazi zokuziphendukela kwemvelo zingaphikisana nokuthi kuyiqiniso nge-akhawunti yendalo (yize bebona ngobufakazi be-DNA ukuthi abantu bavela kokhokho abajwayelekile bambiza ngokuthi “u-Eva,”) kepha lokho kungenakuchazwa ngokungenela kwaphezulu - ukuthi Umklami onobuhlakani uzoba nelungelo lokuqhubeka esebenza kumklamo wakhe, njengoba nje nendlu ingakhiwanga emzuzwini owodwa, bese ihlala ivuselelwa kabusha futhi ihlelwa kabusha “ngabakhi” bangaphakathi ngisho nangemva kwalokho... Funda kabanzi "
Isimanga sezici ezavela 'ngokuvela kwemvelo' izikhathi ezingaphezu kwesisodwa ziye zabizwa ngokuthi "ukuziphendukela kwemvelo kokuguqula" ngabathembekile. Ukuthi ukuziphendukela kwemvelo kungasitholela iso kuyinto enhle ngokwanele, kodwa ukuthi ungayenza kaninginingi eyehlukene - imvamisa kusetshenziswa izakhi zofuzo ezifanayo kule nqubo - akukholeki ngempela. Ngakolunye uhlangothi, ukwakhiwa okuvamile kuyichaza kahle.
Ngikushayela ihlombe ngokuzama ukubhekana nesihloko esihlukanisayo phakathi kweqembu eliqukethe ngokuyinhloko abacabangi bezenkolo. Kepha okuthize okuhlobene nalesi sihloko yinto eseduze futhi ethandekayo enhliziyweni yami. Enye yezinto engikubone ulwa nazo e-athikili yakho ukuthi amagama e-Bhayibheli ayithinta kanjani imicabango yakho kanye namathuba endaba yokuziphendukela kwemvelo. Kepha kuthiwani uma sihamba sijula ​​kunalokho. Ngabe sesicabangele ukuthi kungenzeka lawomazwi ngabe onakalisiwe? Kuthiwani uma izingqinamba okufanele sisebenze nazo maqondana neBhayibheli ziyimigoqo yokufakelwa enziwe umuntu hhayi uNkulunkulu? Engikukhathazayo ukuthi kungenzeka ukuthi mhlawumbe asikwazi ukwethemba konke okulotshwe eBhayibhelini kube sengathi kuvela kuNkulunkulu. Angisho ukuthi lonke iBhayibheli aliphefumulelwe, ngikhuluma nje ukuthi mhlawumbe kufanele sivulekele ukuthi kungenzeka ukuthi ALIYONKE iBible eliphefumulelwe uNkulunkulu. Lokhu kungenzeka ukuthi ngaphoqeleka ukuba ngikucabangele lapho ngifunda imithombo yeBhayibheli yezazi, ikakhulukazi lokho abalobi abafunda ngokugxeka imibhalo yeBhayibheli ababhalile. Ikakhulu, kungenzeka ukuthi i-Documentary Hypothesis kungaba yincazelo evumayo yokuthi kwenzeka kanjani ukuthi iBhayibheli lavela. Uma ngabe le mbono iyiqiniso, noma okungenani kuyiqiniso, khona-ke besizophinda sicabangele umbono wethu wokuthi lingakanani ibhayibheli empeleni livela kumuntu ngokungafani noNkulunkulu, futhi lingasivumela ukuthi sicabange ngale kwalokho... Funda kabanzi "
Ngiyakuqonda okushoyo, kepha ngiyazibonela ngawami ukuthambekela okushelelayo kokukhetha nokukhetha okuphefumulelwe nokungeyona. Futhi-ke, umbuzo wokuthi ngubani othole udaba lwendalo kabani ongahamba kuzo zombili izindlela: mhlawumbe i-akhawunti yaseBabiloni nje i-akhawunti yebhayibheli idluliselwe kubo ngemithombo engathembekile. Noma kunjalo, ngiyavuma ukuthi imibuzo ephakanyiswe izahluko zokuqala zikaGenesise akufanele inganakwa noma ichithwe ngokukholwa okungaboni.
Kuliqiniso ukuthi ibingahamba zombili izindlela. Kepha into enginenkinga yokuyihlanganisa kabusha ukuthi i-Enuma Elish ibeka kuqala imibhalo yethu yesandla yasendulo yebhayibheli esinayo (ImiQulu Yasolwandle Olufile). Ngakho-ke uma sibheka ubufakazi obukhona, asinabo ubufakazi obuphathekayo bokuthi imibhalo yesandla yebhayibheli yabhalwa ngaphambi kwe-Enuma Elish, noma amanye ama-akhawunti wangaphambilini endalo. Kungenzeka ukuthi ngabe babekhona, kepha asinabo ubufakazi bakho, ngeshwa. Enye inkinga enginayo ngendaba yendalo eseGenesise ukuthi kunezindaba ezimbili zokudala, njengoba izazi zikhombisile. Indaba yendalo ekuGenesise 2 ibukeka sengathi iyayiphikisana nendaba yendalo ekuGenesise 1 ngamaphuzu athile, futhi ukuphela kwendlela umuntu angaxazulula ngayo ukungaboni ngaso linye uma singabeka “ukuhumusha” kwethu lokho okushiwo ngumbhalo. Bengihlala ngikhathele ukuzama ukuchaza okuthile kusetshenziswa “ukutolika”, njengoba sonke sazi ukuthi “ukuhumusha” kungaholela kanjani ekuchazeni okuningi kanye namathuba.
Ngivumelana nawe ngokungaziwa, sidinga ukuhlola ngokwengeziwe isihloko esabhalwa ngu-Andere kanye neDokhumenti Engokomfanekiso. Akudingeki sesabe lezi zihloko njengoba iqiniso lingamelana nokuhlolwa okubucayi. Ngiyabonga kubo bonke abathintekayo ngokuvumela lesi sihloko ukuthi sidingidwe.
Nakhu okusontekile: ISambulo 13: 8. Leli vesi likhuluma ngeWundlu 'elabulawa kusungulwa umhlaba'. AmaGrikhi afundeka ngokweqiniso athi “ukusungulwa kwendawo yonke.” Kungenzeka yini ukuthi amandla aphuma yiBig Bang ngabe lelo yiWundlu, labulawa njengoba indalo yavela? KwabaseRoma 6: 10 kanye 1 Peter 3: I-8 yomabili ikhombisa ukuthi uKristu wafa kanye, kepha kuphela maqondana nezono. Kungenzeka yini ukuthi uKristu wafa ngaphambili, ngqo ekusungulweni komkhathi? Yize kunjalo, 'zonke izinto zidalwe nguye ezulwini nasemhlabeni.' (Col 1: 16) Noma ngabe akunjalo, ingabe iBig Bang isusa uNkulunkulu ku-equation? Ngigcina ingqondo evulekile ngalesi sihloko.
Ngempela isihloko esinempikiswano. Ngikholelwa ukuthi ukuziphendukela kwemvelo okuthile noma ukuguqulwa kwezakhi ezithile zemvelo akukudeleli indalo. Umbuzo: ingabe umsuka waba ngumqambi noma uqhuma? Njengoba ngicabanga ukuthi ukuqhuma kungalethi izinto ezinhle, ngiya kuMdali. Kepha kubuhlakani Bakhe, uMdali anganika ukuvumelanisa nendalo ukuzivumelanisa nezimo. Isikhumba esimhlophe noma esimnyama, mude noma sincane, njll. Kodwa ngaphakathi kodwa siyafana. Okufanayo nezilwane. umgomo uhlala ufana: udinga umuntu ukukhiqiza imbewu omunye ukhule imbewu ukuze ikhule. Lowo ngumgomo. Kepha njengama-cocktails, umuntu angaxuba futhi azivumelanise nezimo. Ngabe ukusekela lokho? Yebo, akuphikisani nakho. Ibhayibheli liwukuqondisa abantu ekukholweni. Hhayi incwadi yesayensi.
Ngicabanga ukuthi ama-WBTS enze iphuzu likhulu kakhulu ngalesi sihloko ukukhombisa ukuthi “bayethemba kanjani ibhayibheli”. Okufanayo nezinye izihloko ezinjengokuthi "zintathu noma kufanele ngithi i-duoism" noma "isihogo".
Ngiyabonga ngendatshana enhle.
Kwesokudla impela Menrov. Ekuphikeni ukuthi ukuziphendukela kwemvelo okungahleliwe kunesibopho kuko konke ukwahlukahlukana kwezinto eziphilayo, kulula kakhulu ukuguqukela kokunye futhi uthi zonke izinto eziphilayo eMhlabeni zaklanywa uMdali. Impela, impilo iyavumelana nezinga elithile, noma ngingaphikisana nokuthi kungumphumela wokuguquguquka okuhleliwe kunohlelo lokuguqulwa lwe-NDE.
Okuthile lapha engivumelana nakho.
"Impela, impilo iyavumelana nezinga elithile, noma ngingasho ukuthi kungumphumela wokuguquguquka okuhleliwe kunohlelo lokuguqulwa lwe-NDE"
Yilokho isimangaliso nobukhulu bukaNkulunkulu bengqondo. Ososayensi abangakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu kufanele bahlolisise ukuthi kusebenza kanjani ufuzo Ama-sandger ama-Tiger angashintsha esizukulwaneni esisodwa kusuka ekudleni okungenangozi okulimazayo kuya kwizikelezi ezinesifiso sokudla namazinyo amakhulu. Isisusa? Isomiso. Kodwa yi-50% kuphela ebopha phakathi kwezilo ezingama-cannibal. Bayasinda kwisomiso bese isizukulwane esilandelayo sibuyela kubadli be-scum abangenangozi. All hale uNkulunkulu Omkhulu. Sicela ume MANJE.
Ukukhethwa kwemvelo kudlala umqulu omncane kangako uma kukhona okufanele kufakwe. Kepha abapristi bethu abaphakeme balo lonke iqiniso ososayensi abasoze bakwenza lokho. Umhlaba uyamzonda uNkulunkulu. USathane ubusa umhlaba lo!
Lokho kufanele kufundele ama-Tiger salamanders.
Kuyamangaza ukuthi noma ngabe ngubani onikele kule nkundla angenela kulesi sihloko, omunye ogcwele 'ama-landmines', angasho kanjalo. Abantu banemizwa eqinile ngalokhu. Isizathu esisodwa okufanele sisobala kubafundi abaningi balesi sithangami ukuthi, uma ukuziphendukela kwemvelo bekuyiqiniso, lokho bekungabonakala kungavumelani nezinkolelo zabo zenkolo. Uma uNkulunkulu engasidalanga, khona-ke akekho uNkulunkulu, noma kungenzeka ukuthi akekho. Lokho kushiya kuphi izinkolelo zethu, kanye namathemba ethu ngekusasa, singasasho amathemba azo zonke izizukulwane ezedlule eminyakeni edlule? Nginesiqiniseko sokuthi uDarwin akenzi ukuvuswa kwabafundi, ebona ukuthi uzofuna kanjani yena uqobo. Lokhu kucashunwa kuyangiphazamisa: “Ubufakazi buqine kakhulu ukuthi noma ngubani onobuhlakani, ofundile kufanele akholelwe ekuziphendukeleni kwemvelo.” URichard Dawkins ubelokhu engomunye wabameli abanohlonze ngalesi sikhundla. Ngakho-ke, noma ngubani ongavumelani noRichard Dawkins akanalwazi futhi uyahlanya? Lokho kuzwakala njengokusongela okuvela ekuxhashazweni, kunokuba kube nesiphetho esinengqondo esivela kumuntu wesayensi ocabangayo. Angithandi ikakhulukazi ukuxhashazwa… Kuningi okwenziwe ngomqondo “wokushintsha ngokuhamba kwesikhathi”. Kepha, yini ngempela eshintshe ngokuhamba kwesikhathi? Ingabe kwakuyizimo zokuphila ezashintsha, noma izimo zashintsha? Mhlawumbe uNkulunkulu wadala izinhlobo ezahlukene zokuphila ngezikhathi ezithile, wase ezivumela ukuba zife ngoba inhloso yazo ibisizelwe. I-ex-JW yake yaveza umbono othokozisayo ngama-dinosaurs. Uthe... Funda kabanzi "
Kuliqiniso, benginengxoxo le owayengumSulumane owayedlulele, manje ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, ngenxa yazo zonke izinto ezimbi azibona ngawakhe: ngakho-ke akekho uNkulunkulu, manje onguprofesa webhayoloji, ukuqiniseka kwakhe ukuthi ukuziphendukela kwemvelo kukhona namuhla? Kanjani ngokuhlolwa kwilebula yakhe. Sikhulume ngokusinda kwabanamandla. Siphakamise ukuthi, njengoba sesithuthuke kakhulu kuze kube manje ekuziphendukeleni komuntu, kungani abantu beyizinyonga, izimpumputhe ezingekho, njll, siphakamise ukuthi ukuze siqhubekele phambili ekuziphendukeleni kwemvelo, kufanele sibabulale bonke labo abanesiphene kubandakanya nabancane, wawenqaba lowo mbono ngokuthi lezi zibalulekile emphakathini. Ngicabanga ukuthi wayiphendula ngokwakhe. Ngakho-ke sibuze, uthole kanjani unembeza uma savela, vele thina (mina) umkhuba omubi sithi thina, vele, ibhayibheli lafakwa, kepha angikaze ngimbone kusukela, kunokuningi engxoxweni kepha kufanele ngithole a ☕️Njengoba sengizoqala umsebenzi… Noma kunjalo, yeka ukuthi kuhamba kanjani..kumnandi kakhulu i-TRA, ujabulele incazelo yakho enengqondo yezinto
I-TRA- kumele ngisho ukuthi ukuphawula kwakho kwakuyinto ekhuthaza kakhulu futhi enengqondo engiyizwile esikhathini eside maqondana nale ndaba. Ngiyaqonda ukukhathazeka kwabantu ngale ndaba. Kepha uma sizama kanzima ukwenza okutshiwo yisayensi kufanelana neBhayibheli, empeleni sengeze ezwini Lakhe futhi sikwenzile kungasebenzi.
Ngiyabonga ngamagama anomusa. Ngikuthola kunzima ukuvumelanisa umqondo wokuba ngumKristu nokukholelwa ekuziphendukeleni kwemvelo. Uma u-Adamu avela, futhi uma engeyena umuntu wokuqala, uKristu wafela isono sikabani? Uma u-Adamu avela, kungenzeka yini ukuthi u-Adamu waba necala “lesono” ngomqondo wasebhayibhelini? Yize kunjalo, wayengabukwa kanjani njengesoni, uma kuphela ukushiyeka kwakhe bekungakavezwa emandleni akhe amakhulu? Kungenzeka yini ukuthi abekwe icala noma abekwe icala uma inqubo yokuziphendukela kwemvelo, engaphelele, imshiye engaphansi 'kokuphelele'? Futhi ukube u-Adamu wayekhuluma ngokungqongqo, engaphelele, ngabe isono sakhe besingathetheleli? Futhi uma bekunjalo, yisiphi isidingo sangempela esingaba khona somhlatshelo wesihlengo? UNkulunkulu angavele amthethelele u-Adamu khona lapho bese kwenziwa futhi ngakho. Kungani uthumele iNdodana yaKho emhlabeni ukuthi izokufa, ngenkathi ukwehluleka kuka-Adamu, ngakho konke izinhloso nezinhloso, kuyisiphetho esinqunyelwe ngaphambili? Uma u-Adamu avela, kanjani futhi kungani iBhayibheli lasho ukuthi uNkulunkulu uphefumlela ku-Adamu umoya wokuphila? Bekungeke yini kube okulungile ngokwengeziwe ukusho ukuthi uNkulunkulu wakwenza lokho kukhokho othile wokuziphendukela kwemvelo owandulela u-Adamu ngezigidi zeminyaka? Kodwa-ke iBhayibheli lithi uNkulunkulu wanika u-Adamu impilo, ngendlela engashiwo nango-Eva. Kungenzeka kanjani lokho? Kwenza u-Adamu ahluke ngokweqile; kodwa uma evela, wayengumuntu nje omuntu owazalwa emhlabeni njengabaningi ngaphambi kwakhe, futhi... Funda kabanzi "
Yebo TRA ososayensi bokuziphendukela kwemvelo sengathi balandela iphethini yomphakathi we-tower tower ngokukhanya okusha okuvela kaninginingi. Haha. Kungani bonke laba bantu befisa ukusenza sikholwe ngemibono emisha yakamuva. Ngake ngabona inkulumo-mpikiswano enamazolo e-richard ngale ndaba futhi ukuba qotho wayebonakala enengqondo ukwedlula labo ababizwa ngokuthi abanye abadali bendalo. Bebehlukumeza nje! Kwakukubi. Ngathola umbono wokuthi wayemelene nenkolo ehlelekile kunanoma yini enye. Ngakho-ke akumangazi ukuthi wayehlukunyezwa. Akekho ngombono wami ongafakazela noma yini enye indlela noma enye komunye. Ngakho-ke kungani thina sonke singacabangi futhi sithobeke komunye nomunye.
Ngiyavuma ngokuphelele. Kuyangihlekisa lapho ososayensi bethola enye ingxenye ye-jigsaw yokuziphendukela kwemvelo bese bethola kabusha imibono yabo. Ngiyakuqonda ukuthi ukufuna iqiniso kuyinqubo - umsebenzi oqhubekayo odinga abaningi abangahambi kahle - kepha bayathanda ukwethula abakutholile njengobufakazi ngenkathi bexosha ngokuqinile ukuzwana kwabo kokuqina okunamandla ngokulinganayo negagasi lesandla namagama abanjwe ngokucophelela - " oh besijwayele ukukholelwa lokhu, kepha manje sesiyazi ukuthi… ”njll. Amaqiniso izolo anezinhlanzi namachipi okugoqa iphepha lanamuhla. Futhi i-Watchtower yenza ngokufana, njengoba usho. Bheka nje umthamo wezincwadi ezifakwe kungobo yomlando, ezinganembile, eziphelelwe yisikhathi INqabayokulinda ekwazile ukuzithola, eziningi zazo ezingasayifanele indawo yamashalofu manje. Okuxakayo ukuthi uma ubeka ama-Evolutionists kanye ne-GB egumbini elihlangene bazohlikihla imichilo omunye komunye ngesizathu esifanayo - futhi bobabili babe necala lezinto ezifanayo abasola ngazo ezinye (mhlawumbe ngaphandle kokubekwa ngokwaphezulu !)
Umcabango enginawo, engimethusa, wokuthi kungenzeka isikhathi esizayo, lapho amaNgisi eziveza, futhi kufanele ngithathe isinqumo sokuthi ngubani phakathi kwabo ongumenzi wami!
Ngicabanga ukuthi noma izinhlangothi ezimbi ezanikeza uJesu ezingezona zizoba nesimo sokungakwazi ukunakekela izidingo zami, kufaka phakathi isidingo sokuqonda kanye nokuba sempilweni.
Ngenkathi uJesu olungileyo eqondisa izingelosi zakhe ngokwedlulele nangokuphawuleka kahle ezidingweni zami.
Kepha uma bengingafuni uJesu njengo umphenyi futhi esikhundleni salokho ngifuna i-Org, lokho kungahle kube nemiphumela engemihle yokuba njengami, ukugwema izindaba ezazibonakala ngathi zakudala.
Okuxakayo nokho ngibona sengathi nginomuzwa wokuthi uNkulunkulu uthi ku-Isaya, Ufuna sizondle thina ngokwethu sakha izindlu zethu, wasikisela ukuthi umphakathi ohleliwe akufanele udingiswe kakhulu.
Ngendlela efanayo Asishilo ukuthi imali yinhle kepha ukuthanda imali kubi.
Cishe into efanayo ingashiwo ngenkolo ehlelekile.
Sisengakwazi ukuhlangana njengamaKristu, kepha kungenzeka kube ngokuthula.
Ngomkhuba weKwayiri singadonsela ukunakekela kwethu njengeqembu futhi sikhangise ukufunda iBhayibheli.